February | 2008 | The World of Pinkgold
ကျွန်မလည်း ဘလော၈့်စရေးတုန်းက ကိုယ်စခဲ့တဲ့ လိုင်းဖြစ်တဲ့ beauty and health နဲ့ ပတ်သက်တာလေးတွေကို တောင် မတင်တာ အတော်လေးကို ကြာနေပြီရှင့်။ အဲဒီတော့ ဒီတစ်ခေါက်မှာ ကျွန်မတို့တွေ စိတ်ဖိစီး မှုတွေ ခံစားလာရရင် ဘယ်လို ဖြေဖျောက် ကြမလဲ ဆိုတာလေးကို ရှာဖွေ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ နားလည် မှုများ လွဲမှာ စိုးလို့ ဘာသာ မပြန်တော့ဘူး နော်
.Get your priorities right-sort out what really matters in your life
.Think ahead and try to anticipate how to get round difficulties
.Share your worries with family or friends whenever possible
.Try to developasocial network or circle of friends
.Leadaregular lifestyle
.Give yourself treats and rewards for positive actions, attitudes and thoughts
.Get to know yourself better improve your defenses and strengthen your weak points
.Think realistically about problems and decide to take some appropriate action, if necessary, distract yourself inapleasant way-don’t bottle things up or sit all night brooding
.Try to keep things in proportion
.Don’t be too hard on yourself
.Seek medical help if you are worried about your health
.There are always people who are willing and able to help, whatever the problem- don’t be unwilling to benefit from their experience
.Relax and take short rest throughout the day, every day
.Make small, regular changes to your lifestyle
.Learn to delegate
.Make space for leisure time
.Have proper breaks for meals
.Make time for yourself everyday and every week
.Listen carefully to those around you
.Enjoy yourself, and your family and friends
ငါဟာ မင်းရဲ့ အစေအပါးပါ….
မင်းဟာ သက်တန့်လှိုင်းလို တစ်ရစ်ရစ်နဲ့
ဟော.. ကြည့်.. တိမ်တွေ ငိုနေပြီ
တစ်ယု တစ်ယနဲ့ စိမ်းထားတဲ့ အချစ်
မပြုစုပဲ ပစ်ထားတဲ့ ပန်း
မမုန်းနိုင်တော့ ငါ ရှုံးလာတယ်
Filed under Love Poem |	Leaveacomment
Let’s Say ..the thAnks, the respects…let’s show by voice !
Posted on February 19, 2008 by cuttiepinkgold
သူ့ကြောင့် အချစ်ကို ပိုနားလည်စေခဲ့လို့ပါပဲ။ ကိုယ်မုန်းခဲ့ဖူးတဲ့လူနဲ့ ဆုံတဲ့အခါ ပြုံးပြပြီး နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။
သူ့ကြောင့် ကိုယ်ပိုကြံ့ခိုင်ခဲ့လို့ပါပဲ။ ကိုယ်နဲ့အတူနေနေတဲ့၊ ကိုယ့်ကို အဖော်ပြုနေသူကို လုံးဝကျေးဇူးတင်ပါ။ သူ့ကြောင့် ပျော်ရွှင်ကြည်နှုးမှုနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ကိုယ်ရနေလို့ပါပဲ။
သူ့ကို ကိုယ်ချစ်ခဲ့စဉ်က သူပျော်နေတာကိုပဲ ကိုယ်မြင်ချင်ခဲ့လို့ပါ။ ကိုယ့်ကို ထားခဲ့တဲ့လူနဲ့ ဆုံတဲ့အခါ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါ။
ကိုယ့်ဘ၀မှာ အမှတ်တရ အတိတ်ခြေရာလေးတွေ ထင်ကျန်အောင် သူ နင်းလျှောက်ခဲ့လို့ပါပဲ။ တစ်ခါပဲဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ ဘ၀မှာ လုပ်ခွင့်ရတဲ့ အခွင့်အရေးဟာလဲ တစ်ခါပဲရှိတယ်။
Epiphyllum ပန်းက တစ်သက်မှာ တစ်ခါပဲပွင့်ပြီး ပန်းပွင့်ချိန် ၄. ၅ နာရီသာ ကြာမြင့်တဲ့ ပန်းမျိုးဖြစ်တယ်။ တစ်သက်မှာတစ်ခါ ဖူးပွင့်ရတဲ့ တိုတောင်းချိန်ကို သူဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး။ ဖူးပွင့်ရဲတဲ့ အစွမ်းသတ္တိကိုပဲ
ဇောင်းကြမ်းပင် (cactus) မျိုးနွယ်စု၊ မှုလပေါက်ပွားရဒေသ တောင်အာဖရိက၊ မက်ဆီကို ပူပြင်းခြောက်သွေ့သော သဲကန္တာရနေရာများတွင် ပေါက်ရောက်၊ ပန်းပွင့်ကြီးမျိုးဖြစ်၊ ပွင့်ဖတ် လှံချွန်ပုံသဏ္ဍာန်၊ ညအချိန်တွင် ပွင့်ပြီး မနက်မှာ ညှိုးနွမ်း၊ ပန်းပွင့်ချိန် ၄. ၅ နာရီသာ ကြာမြင့်၊ ညအချိန်မှ ပွင့်တတ်တဲ့အတွက် “လရောင်အောက်က မိန်းမလှ” ဟု တင်စား ထို့ကြောင့် အချို့လူများက အချိန်တိုတောင်းခြင်းကို ဤပန်းနှင့် ခိုင်းနှိုင်း။
ကျွန်မ မေလ်းထဲ ရောက်လာတာကို ပြန်ပြီး sharing လုပ်ပေးလိုက်တာပါ